Ukutya ebusuku kakhulu kuchaphazela impilo yentliziyo yakho Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngaba unomkhwa wokutya ezinzulwini zobusuku? Mhlawumbi lixesha lokuba uphonononge lo mkhwa. Ngokubanzi, xa sifuna ukunciphisa umzimba kunye nokuphucula impilo yethu, kugxilwe kwinto esiyityayo kwaye singakanani. Nangona kunjalo, uphando lwamva nje lubonisa ukuba ixesha esilityayo nalo lifanele ukuhoywa.
Izifundo zamva nje, ezikhuthazwe yi-American Heart Association, zibonisa ezi datha zilandelayo: ukutya ebusuku kunxulunyaniswa nokuwohloka kwempilo yentliziyo, ngakumbi kwabasetyhini.
1 Ixesha esinokutya ngalo linokuchaphazela njani ukunciphisa umzimba?
2 Ngaba ukuzila ukutya okwethutyana lukhetho olufanelekileyo kwimpilo yentliziyo?
3 Ukuqwalaselwa kukutya kwekhalori yonke imihla
Ixesha esinokutya ngalo linokuchaphazela njani ukunciphisa umzimba?
Ukuxhasa ukuthandwa okukhulayo kokuzila ukutya okungapheliyo, uphando lubonisa ukuba ukutya kwangoko emini, kunokuba kamva kusihlwa, kunokunceda kwinkqubo yokunciphisa umzimba. Idatha ibonisa ukuba xa usitya emva kwexesha, umzimba uthambekele ekukhuthazeni ukutyeba kunye nokucothisa imetabolism.
Ukongeza, kwa ezi zifundo zityhila ukuba ukutya okwenziwe kade kwandisa umngcipheko wesifo seswekile kunye nesifo sentliziyo, ngakumbi kwabasetyhini.
Ngaba ukuzila ukutya okwethutyana lukhetho olufanelekileyo kwimpilo yentliziyo?
Ngokuqinisekileyo oku koko kusiboniswe zezi zifundo. Okwangoku, ukubaluleka kokubeka esweni ngobungcali kunye nokukodwa kufanelekile ukuba kugxininiswe, njengoko umzimba ngamnye usabela kwindlela otya ngayo.
Ngokubanzi, izifundo ezahlukeneyo zibonisa ukuba, malunga nokutya, ukuba nesiqhelo kunye neshedyuli elawulwayo, njengokuzila ukutya okwexeshana, kuyanceda ekulawuleni amanqanaba eswekile yegazi. Ngamanye amagama, kuthintela ukwenzeka kwezifo ezinje ngeswekile.
Ukuqwalaselwa kukutya kwekhalori yonke imihla
Ngexesha lokunyusa isifundo, abathathi-nxaxheba baceliwe ukuba babhale ukutya kwekhalori yabo yemihla ngemihla ukuze izazinzulu zikwazi ukujonga ngokusondeleyo ukutya kwazo.
Ke ngoko, kwabonelelwa ngolwazi olunjenge: ukuba batye ntoni, batya kangakanani, batya nini kunye nenani leekhalori ezifakiweyo. Ke ngoko, iingcali zaqokelela olu lwazi kwaye zalusebenzisa ukubala ubudlelwane phakathi kwempilo yentliziyo kunye namaxesha okutya.
Uphando luveze ukuba abathathi-nxaxheba abatya ngaphezulu kweekhalori emva kwexesha lasemva kwemini bathambekele ekubeni neengxaki zempilo yentliziyo. Kwikhalori nganye efakiweyo emva kwentsimbi yesi-6 emva kwemini, eyona nto ichaphazelekayo luxinzelelo lwegazi, kunye nesalathiso sobunzima bomzimba (BMI) kunye namanqanaba eswekile emzimbeni.
Ke ngoko, izazinzulu zigqibe kwelokuba ukutya okucingelwe kakuhle, okucwangcisiweyo kunye nokutya okunesizathu kunokuba yimfihlo yokugqibezela impilo yentliziyo.